Uyithintela njani iminenke ekunyukeni kwemithi kunye nezityalo ezinesiqu - Ikkaro
yokuqalisa >> Igadi >> Isiziba semifuno >> Isithintelo sobhedu seminenke
Isithintelo sobhedu seminenke
Imigibe kunye neekhonkco ezincinci zezona zinambuzane ezimbi endinazo ngoku egadini. Ingxaki enkulu kuba ziyazibulala izityalo.
Kananjalo nge Inkqubo entsha yokupakisha Kuya kufuneka ulumke kuba kubonakala ngathi bayayithanda kakhulu kwaye bazakuvelisa kakhulu.
Kukho iindlela ezahlukeneyo, iimveliso kunye nobuchule bokulwa nazo. Namhlanje ndize kuxela enye ubuchule bokuthintela iinkumba ekunyukeni kwemithi okanye kwizityalo ezineziqu ezinde kunye nemibono yokuphucula nokuyisebenzisa ngeendlela ezininzi. Kukutshayela ukuthintela ukuba banganyuki baye kwizityalo.
Umbono ulula. Imigibe ibonakala ngathi iyabuphikisa ubhedu kwaye iyathandabuza ukuwela. Ke sizakuqengqa imithi ngobhedu ukubathintela ekunyukeni. Awufaki mbane okanye nantoni na. Kuphela nje ukuba abawuthandi umnxeba wobhedu.
Le ndlela ayibulali iinkumba, kwaye ayenzi ukuba inyamalale, kuyakufuneka uye kuyisusa, kodwa ithintela imithi yakho ekugcwaliseni nasekutyeni.
Le yindlela endandinomthi omncinci womthi weplum.
Ukuyinyusa sifuna ubhedu kuphela. Kubonakala ngathi iinkumba zigxotha iminenke, azikuthandi ukunxibelelana nentsimbi. Ndisebenzise i-1,5m yeentambo ze-6mm ezazishiyekile kufakelo lwe-oveni. Kungcono ukusebenzisa intambo kunye neengcingo ezininzi ukuze ukwazi ukugubungela indawo eninzi.
Siyawaxobula kwaye sikulungele ukusebenzisa. Olunye ukhetho endifuna ukuluzama yiteyiphu yokuncamathelisa ubhedu, eliliphepha lobhedu eliza ngohlobo lwekhasethi ngokungathi ibiyireyiphu yokuthambisa okanye iteyiphu yombane, kunye nokuzincamathelisa. (Ndilindele ukuba ifike kum kwaye ndiza kwenza iimvavanyo)
Kwaye apha sinokubona iziphumo zokugqibela. Malunga neesentimitha ezine zomthi ogqunyiweyo. Ndizamile ukuyiqinisa kodwa andiwucinezelanga umthi kakhulu.
Sele ubonile ukuba wawunjani umthi, ndawucoca amaqokobhe ndawashiya phantsi ukuze abuyele emva ajonge ukuba ayasebenza nyani na.
Kwaye umqobo ungummangaliso
Ngoku kufuneka uzisuse, kodwa akukho namnye owenzekileyo.
Mininzi imibuzo ephakamayo endizakuyiphendula njengoko ndibona ukuba ivela njani.
Ngaba iya kuphulukana nefuthe layo ekuhambeni kwexesha xa ibaleka?
Ngaba uya kuwukrwitsha umthi ukuba asisusi?
Ngaba zikhona ezinye izinto ezingabizi kakhulu esinokuthi siphumeze iziphumo ezifanayo?
Ngaba obu buchule bunokusetyenziswa kodwa ngaphezulu?
Isebenza njani i-tape yokuhombisa yobhedu?
Okwangoku emva kweveki isasebenza.
Ungayilima njani ingca ngaphandle kokulima
Uzenza njani izilumkiso kwiWallapop
ICarolina Reaper okanye iCarolina Reaper
Ungayikhathalaza njani ilayibrari yam yencwadi
izigaba Isiziba semifuno Ukuhamba kwetikiti
Washi, iphepha lobugcisa laseJapan